မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 21
(၀ိသာခဒါယကာက မေးခွန်းများကို ဆက်လက်မေးမြန်း၏။) “ဥပါဒါန်နဲ့ ခန္ဓာဟာ တစ်ခြားစီလား၊ အတူတူပဲလား” “ဥပါဒါန်က ကာမုပါဒါန်၊ ဒိဋ္ဌုပါဒါန်၊ သီလဗ္ဗတုပါဒါန်၊ အတ္တ၀ါဒုပါဒါန်ဆိုပြီး လေးမျိုးရှိတယ်။ ခန္ဓာက ငါးပါးရှိတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ခြားစီလဲ မဟုတ်ဘူး၊ အတူတူလို့ပြောလို့လဲ မရဘူး။ ခန္ဓာငါးပါးကို ဥပါဒါန်နဲ့ နှစ်သက်စွဲလန်းပြီးနေလို့ရှိရင် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ ဥပါဒါန်နဲ့ မနှစ်သက် မစွဲလန်းလို့ရှိရင် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ မဖြစ်ဘူး” လူတိုင်းသည် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ခင်တွယ်ကြသည်သာဖြစ်၏။ ယင်းခင်တွယ်မှုသည် တဏှာ၊ တဏှာကြီးရင့်လာလျှင် ဥပါဒါန်ဖြစ်လာ၏။ ခန္ဓာငါးပါးကို ၀ိပဿနာရှုလိုက်လျှင် ဤခန္ဓာကြီးကို အနိစ္စခန္ဓာ၊ ငြီးငွေ့စရာခန္ဓာအဖြစ်မြင်လာမည်ဖြစ်၏။ ခန္ဓာအပေါ်တွင် ခင်မင်တွယ်တာစိတ်တို့ ကင်းသွားမည်ဖြစ်၏။ ယင်းသို့ ခင်စရာမင်စရာမရှိဟု သိသည့် ဉာဏ်ပေါ်လာသောအခါ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ မဟုတ်တော့။ ခန္ဓာကိုခင်မင်သည့် တဏှာ ဥပါဒါန်တို့ဖြင့် စွဲလန်းနေ၍သာ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာဟု ခေါ်ရ၏။ တဏှာ ဥပါဒါန်တို့၏ တည်ရာခန္ဓာပင်ဖြစ်၏။ ခန္ဓာငါးပါးကို […]
၀ိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ (၄)
(၀ိသာခဒါယကာက ဓမ္မဒိန္နာဘိက္ခုနီ ရဟန္တာမကို မေးခွန်းများ မေးနေခြင်း အဆက်ဖြစ်၏။) “သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းက ဘာလဲ” “သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းက တဏှာပဲ” ဤအဖြေအရ ခန္ဓာငါးပါးဟူသော သက္ကာယ၏အကြောင်းမှာ ဆုတောင်း တဏှာပင်ဖြစ်၏။ တဏှာ ဥပါဒါန် ကံမရှိဘဲ ခန္ဓာမပေါ်။ ကံသည် ဥပါဒါန်လက်အောက်ခံ၊ ဥပါဒါန်သည် တဏှာလက်အောက်ခံဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သက္ကာယခန္ဓာဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းသည် တဏှာပင်ဖြစ်တော့၏။ တဏှာမသေသရွေ့ ခန္ဓာတွေ ထပ်ကာ ထပ်ကာ တွေ့နေရဦးမည်သာဖြစ်၏။ “သက္ကာယတို့၏ချုပ်ရာက ဘာလဲ” “တဏှာ၏ ချုပ်ရာငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဟာ သက္ကာယတို့၏ ချုပ်ရာပဲ၊ တဏှာချုပ်ရင် သက္ကာယလဲ ချုပ်တာပါပဲ” တဏှာသည် သမုဒယသစ္စာ၊ သက္ကာယသည် ဒုက္ခသစ္စာ။ သမုဒယချုပ်၍ ဒုက္ခချုပ်သည်ဟု နားလည်ရမည်ဖြစ်၏။ တဏှာချုပ်လျှင် ခန္ဓာချုပ်သည်ဟုဆိုရသော်လည်း မသေခင်မှာ ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသာဖြစ်၏။ ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းသည့် နိဗ္ဗာန်ရနေပြီဟုဆိုနိုင်၏။ ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသည့် နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ သူမရောက်သေး။ ဘုရားရှင်သည်ပင် ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက် ပရိနိဗ္ဗာန်မစံသေးမီအတွင်း […]
၀ိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ (၃)
ဓမ္မဒိန္နာသည် ဘိက္ခုနီ ၀တ်ပြီးလျှင် ဘိက္ခုနီတို့ကျောင်းတွင် တရားဓမ္မ ကျင့်ကြံအားထုတ်နေလေ၏။ အရှင်မသည် ဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်သကဲ့သို့ သူဋ္ဌေးကတော်လည်းဖြစ်၊ ရုပ်ရည်ကလည်း ကြည်ညိုဖွယ်ရာဖြစ်၊ ရှေးဘုန်းရှေးကံကလည်း ကြီးမားသူဖြစ်သဖြင့် အသိမိတ်ဆွေ ကြည်ညိုသူ အလွန်များပြားလှ၏။ ဆွမ်းခံသွားစဉ်လည်း မအား၊ ကျောင်းတွင် နေစဉ်မှာလည်း ဧည့်ကမပြတ်။ လာရောက်ဖူးမြော်ကြ၊ လှူကြတန်းကြ၊ ပင့်ကြဖိတ်ကြတာတွေ များနေသဖြင့် လူသူလေးပါး ဧည့်ခံစကားပြောနေရသည်နှင့် အချိန်ကုန်နေလေ၏။ တရားအားထုတ်ရန် အချိန်မရှိသလောက်ဖြစ်နေလေ၏။ ဘုန်းကြီးသည့်ဒဏ် (ဘုန်းဒဏ်)ခံနေရခြင်းဖြစ်ပါ၏။ စင်စစ် တရားဓမ္မလိုလား၍ ဘိက္ခုနီဝတ်လာသူဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းကြီးသည်ကို သာယာမက်မောမှုမရှိ၊ အန္တရာယ်အဖြစ်မြင်နေလေ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုဘုန်းဒဏ်မှ ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ဆရာဘိက္ခုနီထံမှ တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နည်းများ တောင်းပြီး ဝေးလံခေါင်သီသည့် တောအုပ်တစ်ခုသို့ အဖော်ဘိက္ခုနီတို့နှင့်အတူ တရားအားထုတ်ရန် ထွက်ခွါခဲ့လေတော့၏။ တောအရပ်ဒေသတွင် အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်စွာ တရားအားထုတ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါ၏။ အရှင်မသည် ပါရမီရင့်သန်သူလည်းဖြစ်၊ တရားရလိုသည့်ဆန္ဒကလည်း ပြင်းထန်လှသဖြင့် ခုနှစ်ရက် အားထုတ်လိုက်ကာမျှဖြင့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ […]
၀ိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ (၂)
ရာဇဂြိုဟ်မြို့ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတွင်းရှိ ၀ါးရုံများ (၀ါးဖြင့်ဆောက်ထားသောကြောင့် ဝေဠုဝန်ကျောင်းဟု အမည်တွင်သည်။) ထိုအခြေအနေကို ဓမ္မဒိန္နာ အကဲခတ်ရခက်နေရှာ၏။ သူ့အပေါ် အလိုမကျ၍ဟုထင်မြင်နေရှာ၏။ သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးအပေါ် အလိုမကျဖြစ်ခဲ့သည်လားဟု သံသယ၀င်နေရှာ၏။ အလိုမကျဖြစ်မည်ဆိုလျှင်လည်း တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာလျှင် စိတ်ပြန်လည်ပြောင်းသွားမည်ဟု မျှော်လင့်လျက် နေရှာ၏။ သို့သော် ရက်တွေကြာညောင်းသော်လည်း သူ့အမူအရာများမှာ ဘာတစ်ခုမျှ ပြောင်းလဲမလာခဲ့။ စင်စစ်မှာ ဓမ္မဒိန္နာ ထင်ထားသကဲ့သို့မဟုတ်၊ အနာဂါမ်တည်ပြီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အမူအရာပင်ဖြစ်၏။ သောတာပန်အဆင့် သကဒါဂါမ်အဆင့်မျှသည် ကာမာရာဂါနုသယကို အမြစ်ပြတ်မပယ်သတ်နိုင်သေးသဖြင့် ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ်တောတွင် ပျော်ရွှင်ရိုးရှိသည်သာ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သာားသမီး ဇနီးမယားတို့နှင့် အတူတကွ နေထိုင်လျက်ရှိကြသေးသည်သာဖြစ်၏။ အနာဂါမ်တည်ပြီးလျှင်မူ ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့ကို ခုံမင်တပ်မက်မှု အလျဉ်းမရှိတော့။ တရား၏တန်ခိုး စွမ်းရည်သတ္တိကြောင့် ကိလေသာ ပါးသွားခြင်းဖြစ်၏။ အနာဂါမ်ဖြစ်က လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်ရှိ ကိလေသာမှန်သမျှ အလုံးစုံ ကုန်သွားခြင်းဖြစ်၏။ ဓမ္မဒိန္နာသည် […]
၀ိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ (၁)
တစ်ခါက ရာဇဂြိုဟ်မြို့နေရာ ဘုရားရှင် ခဏခဏဟောတဲ့ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင် ဝေဠုဝန်ကျောင်းထဲရှိ ရေကန်ကြီး ဘုရားရှင် ရာဇဂြိုဟ်မြို့ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးနေစဉ်က ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်၏။ ထိုစဉ်က ၀ိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာတို့ဇနီးမောင်နှံ ရှိခဲ့၏။ ဘုရားရှင် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ကြွလာချိန်တွင် ဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များကို နာကြားရ၍ ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးနှင့်တကွ ၀ိသာခသူဋ္ဌေးအပါအ၀င် များစွာသောပရိသတ်တို့ သောတာပန်တည်ခဲ့ကြလေ၏။ ၀ိသာခသူဋ္ဌေးသည် လူသားဘ၀ဖြင့်ပင် သောတာပန်တည်ခဲ့သူဖြစ်၏။ ရာဇဂြိုဟ်မြို့တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ဘုရားရှင်ကလည်း တရားဓမ္မများကို နေ့စဉ်ဟောကြားပေးလျက်ရှိရာ တရားနာရင်းဖြင့်ပင် နောက်ရက် သကဒါဂါမ်တည်၊ နောက် တစ်ရက်တွင် အနာဂါမ်တည်ခဲ့လေ၏။ အနာဂါမ်တို့မည်သည် လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်၌ရှိသော အာရုံတို့ကို ခုံမင်နှစ်သက်မှုမရှိ၊ မဂ်နှင့်ပယ်ပြီးဖြစ်တော့၏။ ကာမရာဂါနုသယကို အမြစ်ပြတ်ပယ်သတ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ရူပဘုံ အရူပဘုံခင်တွယ်သည့် ဘ၀ရာဂါနုသယလောက်သာ ကျန်တော့၏။ ကာမဘုံတွင် မည်သည့်အာရုံမျိုးနှင့်တွေ့ကြုံစေကာမူ သာယာစုံမက်မှုမရှိတော့။ မည်မျှအဖိုးတန်ပစ္စည်းကိုပင် တွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်စေ၊ မည်မျှပင် ချောမောလှပသူကိုပင် တွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်စေ […]
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက “ခန္ဓာထဲ ရှိကောင်းတဲ့တရားက သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ခန္ဓာထဲ မရှိကောင်းတဲ့တရားက မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ခန္ဓာထဲတွင် သမ္မာဒိဋ္ဌိ များများရှိအောင်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်၏။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်၊ ပါးနိုင်သမျှ ပါးအောင်၊ နောက်ဆုံး အမြစ်ပြတ်ပယ်သတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်၏။ သံသရာမှာ အိုလိုက် နာလိုက် သေလိုက် ထပ်ပြီးလည်နေရသည်မှာ ခန္ဓာထဲ မရှိကောင်းသော တရားရှိနေ၍သာ ဖြစ်၏။ ရှိကောင်းသော သမ္မာဒိဋ္ဌိသာ ရှိနေမည်ဆိုလျှင် အိုသေဇာတ်သိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်၏။ ခန္ဓာထဲ ရှိကောင်းသောတရားကိုလည်းမသိ၊ မရှိကောင်းသောတရားကိုလည်း မသိသောကြောင့်သာလျှင် အိုသေဇာတ်မကင်းနိုင်ဘဲ သံသရာရှည်နေကြရခြင်းဖြစ်၏။ ခန္ဓာထဲတွင် အရှိတရားသည် ဖြစ်လိုက် ပျက်လိုက်ဖြစ်နေသည့် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဟုဆိုရသည့် ဖြစ်ပျက်သာ ရှိ၏ (သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ၊ သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ ဒုက္ခာ၊ သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တာ)။ ရုပ်နာမ် ဓမ္မသဘာဝတို့သာ ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ […]
ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့မဂ်သည် နိဗ္ဗာန်ပို့တတ်တာပဲရှိတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဟာ သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ နိဗ္ဗာန်သည် ဘုရားပွင့်လဲ ရှိတယ်၊ ဘုရားမပွင့်လဲ ရှိတယ်၊ အချိန်မရွေး ရှိတယ်။ ဘာကြောင့်တုန်းဆိုရင် ဘုရားလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ အတ္ထိ ဘိက္ခဝေ နိဗ္ဗာနံ- နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်-တဲ့။ ဒါဘုရား ဟောထားတာ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အဇာတံ- ပဋိသန္ဓေမနေရတဲ့ နိဗ္ဗာန်၊ အဘူတံ- ဘယ်သူမှ မပြုလုပ်တဲ့ နိုဗ္ဗာန်၊ အသင်္ခတံ- ဘယ်သူမှ မပြုပြင်ဘဲနဲ့ သဘာဝဓမ္မအတိုင်း ရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီး ဥဒါန်းပါဠိတော်မှာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင်ဟောထားပါတယ် (အတ္ထိ ဘိက္ခဝေ နိဗ္ဗာနံ အဇာတံ အဘူတံ အသင်္ခတံ)။ ဒါဖြင့် နိဗ္ဗာန်ရှိတာတော့ သေချာပြီ၊ ဘယ်သူပြုလုပ်ထားတာလဲဆိုရင်တော့ ဘယ်သူလုပ်ထားတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ရမယ် (အပစ္စယာ ဓမ္မာ အသင်္ခတာ ဓမ္မာ)။ နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာအောင် ပြတာ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင် ရချင်ရင်တော့ ပြုပြင်တဲ့ သင်္ခတနယ်ထဲကထွက် […]